अचम्म लाग्यो, नेपालमा मैले सोच्दै नसोचेको घटना भयो ! – Khabarhouse
अचम्म लाग्यो, नेपालमा मैले सोच्दै नसोचेको घटना भयो !
Khabar house | ७ फाल्गुन २०७६, बुधबार १७:१६ | Comments
काठमाडौं : टेकनबहादुर थापा चीनको बेइजिङबाट फर्केको चार दिन भयो। काठमाडौं आएदेखि एकपल चैनको सास फेर्न पाएका छैनन्। सतुंगल बस्ने टेकनलाई छिमेकीहरू शंकाको आँखाले हेर्छन्। धेरैले त उनीसँग बाेलीचाली पनि बारेका छन्। छिमेकीको शंका दूर गर्न उनले टेकु अस्पताल गएर जचाए, तै धर पाएका छैनन्। उनी आफ्नो स्वास्थ्य रिपोर्ट खल्तीमै बोकेर हिँड्छन्।
सोध्न आउनेलाई त्यही देखाउँछन्। कति चुप लाग्छन्, कति नपत्याएर केरकार गर्न थाल्छन् । ‘मलाई कोरोना लागेको भए उहीँ चीनमै मर्थें नेपाल आउँदिन थिएँ। मेरो परिवारलाई किन सार्थें? मेरो परिवार मलाई प्यारो छैन र?’ टेकनले भने, ‘अचम्म लाग्यो, नेपाल मा मैले सोच्दै नसोचेको घटना भयो।’ टेकन होटल म्यानेजमेन्टको इन्टर्नसिप गर्न दस महिनाअघि बेइजिङ पुगेका थिए।
कोरोना भाइरसको प्रकोपले चीनका होटल रित्ता भएपछि उनी उतै जचाइवरी फागुन ३गते काठमाडौं फर्केका हुन्। समस्याको सुरूआत फर्केको भोलिपल्टै भयो। फागुन ४गते बिहानै सतुंगल प्रहरी चौकीका इन्स्पेक्टरले उनलाई फोन गरेर भने ‘खुरुक्क चौकी आउने कि भ्यान पठाउँ।’टेकन तर्सिए। चीनबाट फर्किंदा कुन्मिङमा १७ घन्टा ट्रान्जिटमा बिताउनुपरेकाले उनी थाकेका थिए।
बिहान ९ बज्नै लाग्दा पनि ओछ्यानबाट उठेका थिएनन्। एक्कासि प्रहरीले घरबेटीको फोनमा फोन गरेपछि उनको हंसले ठाउँ छोड्यो। विस्तृत कारण उनले बुझेकै थिएनन्। प्रहरी चौकी पुगेपछि मात्र थाहा पाए,उनी वि’रूद्ध उजुरी परेको रहेछ। बेइजिङबाट आउँदा ‘कोरोना भाइरसको संक्रमण बोकेर ल्याएको र घरमै लुकेर बसेको’ भन्दै छिमेकीहरूले वडा कार्यालय मार्फत् उजुरी दिएका रहेछन्। थप भिडियोमा हेर्नुहोस भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।
खोला भित्रको ढुङ्गा निकालेर बेच्दै परिवार पाल्ने सुन्दरीको जादुमय स्वर (भिडियो सहित)